Warar - Kusoo Biir Heerka Higg
Ku soo biir Higg Index
Waxaa soo saaray Isbaheysiga Dharka ee Joogtada ah, Heerka Higg waa xirmo qalab ah oo awood u siinaya sumadaha, tafaariiqleyda, iyo tas-hiilaadka dhammaan noocyada - heer kasta oo ay ku jiraan safarkooda joogtaynta - si sax ah loo cabbiro oo loo dhaliyo wax-qabad joogto ah oo shirkad ama shey. Heerka 'Higg Index' wuxuu soo bandhigayaa aragti guud oo awood u siineysa ganacsiyada inay sameeyaan horumarin macno leh oo ilaalisa fayoobaanta shaqaalaha warshad, bulshada deegaanka, iyo bey'adda.
Qalabka 'Higg Facility Tools' wuxuu cabiraa saamaynta waaritaanka deegaanka iyo bulshada ee xarumaha wax soo saarka adduunka oo idil. Waxaa jira labo Qalab oo ah Higg Facility Module (Higg Facility Environmental Module (Higg Matan) and Modg Facility Social & Labour Module (Higg FSLM).
Jaangoynta Cabbiraadda Saamaynta Bulshada iyo Deegaanka ee Xarumaha
Dharka, kabaha, iyo soosaarka dharka ayaa ka dhaca kumanaan xarumood oo adduunka ah. Xarun kasta waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa guud ahaan sii jiritaanka warshadaha. Qalabyada 'Higg Facility Tools' waxay bixiyaan qiimeyn bulsho iyo bey'adeed oo jaango'an oo fududeynaya wada hadalka ka dhaxeeya wada-hawlgalayaasha qiimaha si bulshada iyo bey'adda loo hagaajiyo heer kasta oo ka mid ah silsiladda qiimaha adduunka.
Module deegaanka Higg
Qiimaha deegaanka ee soo saarista iyo xirashada dharka waa mid sareeya. Sameynta jiinis caadi ah waxay u baahan kartaa ku dhowaad 2,000 oo galaan oo biyo ah iyo 400 megajoules oo tamar ah. Markii la iibsado, daryeelida isla surwaalka jiiniska ah inta uu nool yahay oo dhan wuxuu soo saari karaa in ka badan 30 kiilo garaam oo kaarboon laba ogsaydh ah. Taasi waxay u dhigantaa inaad baabuur waddo 78 mayl.
Module-ka 'Higg Environmental Environmental Module' (Higg FEM) wuxuu ku wargaliyaa soosaarayaasha, noocyada, iyo dukaamada tafaariiqda waxqabadka deegaanka ee xarumahooda shaqsiyeed, iyaga oo awood u siinaya inay sare u qaadaan hagaajinta waarta.
Higg FEM waxay siisaa tas-hiilaadka sawir cad oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelanayso deegaanka. Waxay ka caawisaa inay aqoonsadaan oo ay mudnaanta siiyaan fursadaha hagaajinta waxqabadka.
Higg Xarunta Bulshada & Shaqada
Qof kastaa wuu u qalmaa inuu ka shaqeeyo jawi nabdoon oo caafimaad leh oo ay ku helaan mushahar cadaalad ah. Si loo hagaajiyo xaaladaha bulshada iyo shaqada ee shaqaalaha soo saara balaayiin dhar ah, dhar, iyo kabo sanad kasta, noocyada iyo soo saarayaasha waxay u baahan yihiin inay marka hore cabbiraan saameynta bulshada ee xarumaha adduunka.
Heerka Higg ee Bulshada & Shaqada (Higg FSLM) wuxuu dhiirrigeliyaa nabadgelyo iyo caddaalad xaaladaha bulshada iyo shaqada shaqaalaha silsiladda qiimaha adduunka oo dhan. Xarumaha waxay u adeegsan karaan qiimeynta la dhaliyay si ay u fahmaan meelaha kulul isla markaana u yareeyaan daalka xisaabta. Halkii ay diirada saari lahaayeen u hogaansanaanta, waxay waqti iyo dhaqaaleba u huri karaan sameynta isbedelo nidaamsan oo waara.
Sii wad inaad ku biirto HIGG si aad u gaarto is-qiimayn hal-abuur leh oo u saamaxaysa shirkadda inay qiimeyso noocyada maaddooyinka, wax soo saarka, dhirta wax-soo-saarka iyo geeddi-socodka geeddi-socodka iyada oo loo eegayo xulashooyinka naqshadeynta deegaanka iyo wax soo saarka.
HIGG Index waa aalad warbixineed joogtayn warbixineed oo ay adeegsadaan in kabadan 8,000 soosaarayaal iyo 150 magac caalami ah.Waxay tirtiraysaa baahida loo qabo is-qiimeyn isdaba-joog ah waxayna caawineysaa in la ogaado fursadaha lagu hagaajinayo waxqabadka.
Waqtiga boostada: Abriil-05-2020